Izatifikethi ezityikityiweyo ze-SSL kwiChannel 58 > UVielhuber uDavid
Izatifikethi ezityikityiweyo ze-SSL kwiChannel 5811
Kuba masibethele ngokufihlakeleyo, iiwebhusayithi ezifihliweyo ngoku zikumgangatho. Nokuba uphuhliso lwasekhaya, izatifikethi ze-SSL ziye zaba yinto ebaluleke kakhulu (umzekelo, navigator.geolocation ifuna ukubethela kwe-SSL kwalapha ekhaya). Ukusukela inguqulelo yama- 58 ye-Chrome, inkxaso ye-CN (Igama eliQhelekileyo) icinyiwe kwaye i-SAN (Igama EliliGama eliNgezelelweyo) yenziwe yanyanzelwa. Ngenxa yoko, Chrome ngesiquphe akusekho wamkela bonke ngokuqhelekileyo SSL iziqinisekiso wadala.
Ungasebenzisa izixhobo ezikwi- Intanethi ezinje ngeZeroSSL ukwenza izatifikethi okanye usebenzise iiparameter zokuqala njenge --ignore-certificate-error okanye iflegi chrome: // flags / # allow-insecure-localhost to get Chrome to work without certificates valid; Nangona kunjalo, sifuna ukusebenzisa i-OpenSSL ukwenza izatifikethi ezityikitywe ekhaya eziqukethe iSAN kwaye zamkelwe ngokupheleleyo yiChannel. Le liner inye yenza yonke into eyimfuneko (kuphela www.tld.local kufuneka kutshintshiselwane ngedomain oyifunayo):
Kuba i- OpenSSL ngelishwa ayinangxoxo ngokuthe ngqo yokuchaza i-SAN, ifayile yoqwalaselo iyenziwa kuqala, i-OpenSSL ibizwa ngayo kwaye ifayile iyacinywa. Abasebenzisi beWindows banokuwenza ngokulula lo myalelo nokuba ngoncedo lukaCygwin (kunye no-bash -c "...") okanye nge- WSL entsha. Ezi fayile zimbini zivelweyo www.tld.local.key kunye www.tld.local.cert zinokukhethwa kwi-MAMP, umzekelo:
Abasebenzisi bakaWindows emva koko balayisha phantsi ko "Lawula izatifikethi zomsebenzisi" (i-certmgr) kwi "Abasemagunyeni abaqinisekisiweyo beengcambu":
Okokugqibela, qala kwakhona i-Chrome (chrome: // qala kwakhona) kwaye ukonwabele ukukhiya okuluhlaza: